Thintela uhlaziyo loMyalezo okanye ubuyele kuhlobo lwangaphambili | Iindaba zeGajethi
«Uhlaziyo olunyanzelekileyo loMyalezo. Ayikwazi ukubuyela kwi-MSN Messenger » ke funda umxholo wenqaku endilibhalileyo ngo-Okthobha 1. Njengoko besithi ukulungisa kububulumko, namhlanje ndiza kuyenza kuvuyo lwabantu abaninzi abafuna ukuqhubeka nokusebenzisa ifayile ye Inguqulelo yakudala yoMthunywa, iMSN yobomi bonke.
CNjengoko usenokuba uqikelele, kunokwenzeka ukuba ubuyele kuhlobo lwangaphambili loMthunywa okanye ukuba awukahlaziywa kuhlobo olutsha, unokuluphepha. Ayisiyonto endiyichazileyo kwinqaku elidlulileyo yayingeyonyani, ukuba uzama ukuvula i-MSN Messenger 7.5 yakho iyakukunyanzela ukuba uhlaziye kwi-Live Messenger, kodwa Oscar, undwendwe lwebhlog, ufuna ukwabelana nathi ngobuqili bokunqanda ukuvuselelwa kwaye emva kokuzama kufuneka ndiyilungise kwaye ndithi ewe Kuyenzeka ukuba uqhubeke nokusebenzisa uMthunywa we-MSN wakudala.
Baninzi abasebenzisi beM Messenger abangonelisekanga yinguqulelo yeWindows yeWindows kwaye abafuna ukuqhubeka nokusebenzisa uhlobo lweMSN. Eli qhinga lilandelayo likuvumela ukuba uphephe ukuhlaziya ukuze uphile kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba njengayo nayiphi na enye inkqubo, ukuba awuhlaziyi unokuba nayo imiba yezokhuseleko, njengoko ubungozi obufunyenwe kwinguqulelo yakudala bungenakulungiswa ngohlaziyo. Ke ungafaka INGOZI ikhompyuter yakho.
USele ndiyithethile le nto, ingcebiso yam yile hlaziya kuhlobo olutsha uya kusiqhela. Cinga ukuba kuyakubakho uhlaziyo olutsha kwinguqulelo ebukhoma eya kulungisa iingxaki kwaye iphucule inkonzo. Andizisebenzisi iinguqulelo ezindala zayo nayiphi na inkqubo yasimahla, kungaphantsi kakhulu ukuba le nkqubo isebenza kwi-Intanethi.
YUyazi ukuba luthini uluvo lwamHlaziya!), Ngoku kwabo banomdla wokusebenzisa iMSN Messenger, umzekelo abalawuli beCybercafés abanjengo OscarNazi iindlela ezimbini onokukhetha kuzo:
Ndinenguqulo ye-Live Messenger efakiweyo
Ukuba sele unefayile yeWindows Live efakiweyo, into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuyikhupha ukuze ufake endala. Makhe sibone ukuba njani:
1) Yiya kwimenyu yokuQala kwaye uvule iPhaneli yokuLawula. Xa iphaneli ivuliwe, khetha "Yongeza okanye ususe iinkqubo", emva koko ukhethe u "Windows Live Messenger" kuluhlu kwaye ucofe ku "Susa" iqhosha.
2) Uya kufumana iwindow yokuqinisekisa eya kukubuza ukuba uqinisekile ukuba ufuna ukucima iWindows Live Messenger kwikhompyuter yakho. Cofa ku "Ewe" kwaye le nkqubo izakuzikhupha ngaphandle kokuba wenze enye into.
3) Ngoku kuya kufuneka ufake inguqulo 7.5 ye-MSN Messenger. Ukuba usenayo ifayile yokufaka kwikhompyuter yakho, qala ukuyifaka, kungenjalo unokuzikhuphela kuyo Softonic. Xa uyifakile vula inkqubo kwaye uya kubona ukuba ikunyanzela njani ukuba uyihlaziye, ukunqanda ukusebenzisa le ndlela ilandelayo.
Ndifakele uguqulelo lwe-7.5 MSN Messenger
Ukuba ufake i-7.5 nje, okanye sele uyifakile kodwa uzama ukuthintela uhlaziyo ukuba lungenzeki, yenza oku kulandelayo:
1) Into yokuqala kunye nesisiseko kukuba le nkqubo ivaliwe. Akwanelanga ukuba uyivale ifestile, kufuneka uyivale ezantsi ekunene ngokunqakraza ngeqhosha lesibini le mouse (ngesiqhelo ekunene) kwi icon encinci ye-Messenger kwaye ukhethe u "Vala".
2) Ngoku ukuba inkqubo ivaliwe ngokupheleleyo, kuya kufuneka ufumane ifolda apho ifakwe khona. Ukwenza oku, landela le ndlela ilandelayo:
"Ihard drive yakho, ihlala i (C :)" >> "Iifayile zenkqubo" >> "iMSN Messenger"
Xa silapho sizakucofa ngeqhosha lesibini (ngesiqhelo ilungelo) kwifayile ephunyeziweyo "msnsmgr.exe", ukuba ubona kuphela "msnsmgr" unayo izandiso ezifihliweyo, Ngale ndlela uza kuvula ifayile ye- Imenyu yokujonga imeko kwaye kuyo kuya kufuneka ukhethe "Iipropati" ezantsi.
3) Ifestile ebizwa ngokuba yi "msnmsgr.exe Properties" iya kuvulwa. Khetha ithebhu "yokuhambelana" kwaye ujonge ibhokisi "Sebenzisa le nkqubo kwimowudi yokuhambelana ye:". Emva koko khetha "Windows 2000" kuluhlu olwehlayo ngokunqakraza kwityolo elincinci. Okokugqibela nqakraza ku- «Faka isicelo» emva koko ku- «Kulungile».
ANgoku ixesha elizayo xa uvula i-Messenger ayizukuphinda ikucele ukuba uhlaziye. Andazi ukuba eli qhinga liza kuhlala ixesha elingakanani kodwa liyasebenza. Enkosi Ku Oscar kwincam esele ikho Isikhulu iza kunginwa. Khumbula ukuba kungcono ukuvuselela inguqulelo entsha ukunqanda iingxaki zokhuseleko, ubuncinci ndiza kuthi. Ungahlala unolwazi kwi "Konke malunga noMthunywa". Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Thintela uhlaziyo loMyalezo okanye ubuyele kuhlobo lwangaphambili
Izimvo ezi-111, shiya ezakho
Hayi malunga neloqhinga ndizamile kwaye lisebenzele mna, kodwa! Kwafuneka ndenze ifomathi ye-pc yam kwaye ngoku ndifuna ukufaka umthunywa 7.5 ukutshintsha ukuhambelana kwakhona, abandivumeli nokuba ndiyifake, ndingenza njani ngoku, windows livw yenza umgca ucothe kum kwaye ixhoma yonke into rhoqo, uyakuba nelinye iqhinga
Ewe, ukuba ayikuvumeli ukuba ufake umthunywa, ndicinga ukuba ayinakulungiswa. Awuzukukhetha ngaphandle kokuqhela umthunywa omtsha. Konke okugqibelele.
gean carlo sitsho
Bekulungile enkosi ngenkxaso yakho ye-pucha ondigcinele yona ehh kuba koomatshini bakudala yi-lemta kakhulu kwimibulelo ebukhoma
Phendula i-gean carlo
molo ndizamile kwaye i-messenger 7.5 ifakwe kakuhle kodwa ingxaki iza xa ndisiya eposini kuba xa ndiyinika andazi ukuba kutheni isiya kwi-msn bukhoma kwaye andikayiboni loo ndlela naphi na. ungabuyela kwi-imeyile yangaphambili ?
Nge-msn entsha andinakusifaka isithembu kwaye ndifuna ukubuyela kuhlobo lwangaphambili, ndicela umntu ondixelele ukuba ndenze njani
Mholweni !!! Ndiyabulela kakhulu ngokundinceda kule nto kuba umthunywa ophilayo wayengandisebenzeli.
Eli qhinga lisebenze kakuhle kakhulu kum enkosi kakhulu
capo Lowo waphosa isisombululo
enkosi isebenze ngokugqibeleleyo kum ... esisigidi
akhonto indikhonzileyo !!!
le reeeeeeeeeeeeeee yandikhonza !!!
molo, ayisiyiyo nyani into yokuba sifuna ukuhlaziywa okanye ubuncinci mna, okwenzekayo kukuba ingxelo yethu yepakethi yenkonzo ayihambelani. iqhinga lilunge kakhulu kuba liyabulela
I icon yeMESINGER ayibonakali kuluhlu lokucofa ali kunye ne-desistalarlo, kufuneka ndenze ntoni? Enkosi
UJORGE PEÑA sitsho
Andazi ukuba kwenzekani nge-MSN MOVE, KODWA NDICINGA UKUBA INEZINYE IINGXAKI, NGOKUKHULULEKILEYO ZIKHUPHELELE UKUZE ZIHLAZIYIWE AKUSEKHO UKUVUMELEKA UKWENZA INKONZO KUNYE NOKUTHANTSI KOKUFUMANA IMIFANEKISO NGOKUBA IKHAMERA… ENKOSI UKUBA UNGANDIBULELA …
Phendula JORGE PEÑA
Ndifakele iifestile ezintsha ze-windows kwaye bonke abafowunelwa bam balahlekile, kufuneka ndenze ntoni? Ndibasindisile kwaye abade babonakale ...
Andifumani mthunywa xa ndisusa iinkqubo endizenzayo
UJose Juan sitsho
molo enkosi kakhulu isebenze kakuhle bye
Phendula ujose juan
Imbi kakhulu into yokuba isisombululo sisebenza ngeewindows xp ... ngokubona okanye nokucinga ngayo 🙁 kuya kufuneka ndiqhelane nenkunkuma yobomi obutsha
Andifumani windows i-icon yomthunywa ophilayo. Enkosi ngoncedo lwakho.
Maria Fernanda sitsho
idatha ebalaseleyo ..
Ayibonakali njengenkqubo, andazi ukuba iPC yam ifike phi kwaye ndifuna ukufaka ukudibanisa kwaye ayisebenzi.
kukho kuphela entsha ...
Phendula uMaria Fernanda
Andiyiqondi i-msn entsha ..?
ngubani onokundikhokela ..?
Ndiyifakile kwiifestile bukhoma kwaye abafowunelwa bam ababonakali, kufuneka ndenze ntoni?
Molo, jonga, bendineefestile zomyalezo ngaphambili kwaye bendiqhuba kakuhle kakhulu ... Kodwa ndabona ukuba kukho uhlaziyo olwaluyi-9.0 kwaye ndiyikhuphele, into embi kukuba andiyithandi ukuba injani kwaye Andonwabanga kakhulu, ndingathanda ukubuyela kwakudala (windows live messenger) ndicela undincede kungekudala kuba andonwabanga ngayo.
Kwavela kulungile, kodwa xa ndavula i-msn, ndandingasenalo unxibelelwano 🙁
Nceda, ndiyabulela kuwe ukuba uyandinceda ndibuyele kule yangaphambili
Ngale nto andinakuthumela iifoto. Ngxamisekileyo ndifuna ukubuyela kwangaphambilini
ULuis Cori sitsho
Enkosi Maestrazo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Imibuliso evela eCusco-Peru
Phendula uLuis Cori
Molo, khuphela le nguqulo intsha kodwa ayizizo zonke iinkqubo ezikhutshelweyo, sendiyenzile kabini kwaye ngokufanayo, naxa ndiqala icandelo kubonakala iwindow kwaye isithi windows live iqonga lonxibelelwano lifumene ingxaki kwaye kufuneka livale, andiyibeki ukuthumela kwaye kuyavala, kodwa ukuba andikunanzi, ndingancokola ngaphandle kwengxaki, eyona nto kukuba, andifuni ukujonga le festile ngalo lonke ixesha.
Molo, molweni ekuseni, ungandinceda ukusombulula ingxaki, ngenguqulelo entsha yomthunywa, kuvela ukuba iphuma ngesiNgesi, kwaye ndiyayifuna ngeSpanish, ungabonisa amanyathelo okwenza utshintsho, lez a, Ndiyabulela impendulo ekhawulezileyo, enkosi
I-good0p ps ndinentandabuzo pff¡¡ iyandixinzelela ndingazi ukuba ndiyisombulule njani aii vaa kwi-windows uguqulelo bukhoma
Xa ndiqala iseshoni andiyiboni ibhokisi ethi ndizama kamva kwaye impazamo ibonakala sele ndilandele onke amanyathelo esisombululo sempazamo kwaye akukho nto kwaye ingakhange ikhutshwe kwaye iphinde ifakwe iiwindows zihlala kwaye akukho nto ihleli injalo. yenza oku ngamandla
ups uxolo po0r upelo olugwenxa aa ps impazamo
YI-ERROR CODE: 8100030d NDILINDE IMPENDULO ENKOSI
Enkosi kakhulu ngegalelo elisebenze ngokumangalisayo enkosi
Molweni bafana abavela kwi-msn, che kubonakala kum ngathi i-messengger entsha imbi kakhulu kwaye bayayeka ukufunana ngokufuna ukuyiguqula nge-msn eqhelekileyo kulungile. Ikwazisa iingxaki ezininzi, umzekelo, ndiyibekile phantsi kwaye xa ndingenalo nolunye unxibelelwano, ndaphantse ndafa, ndathi ndilufumene olu ncedo. Ndicinga ukuba ushiya i-msn yangaphambili kwaye yiyo loo nto bafana kwaye ndiyabulela ngoncedo enilunikayo
Andizange ndiyazi malunga naloo nto
kunye nokuphila…. isasilela kancinci
ukuphuma kweenwele ..
kodwa kulungile enkosi kunjalo
Ingcebiso yakho indisebenzele
, udadewethu akazange aqhelane nokuphila, endikuthandayo
entsha yinto efundisayo ye-blowjob!
funkaaaaaaaaa… ndoda enkosi kakhulu khange ndifune ukuvuselela kule WLM 2009 ndiyayithanda i-8.1 yam enkosi kakhulu
Mkhulu ... enkosi kakhulu!
KAKUHLE KAKHULU ENKOSI KAKHULU
NdineVista, ndiyenzile yonke into oyithethileyo de ndabona ukuba isebenza kuphela i-XP
wjauJAUA kwaye yandinika iziphumo, kodwa i-msn yathatha ixesha elingaphantsi kwemizuzwana emibini, ndizamile kunye nabo bonke abanye Kude Kube IZIPHUMO ZAM !!!!
Iseva yewindow 2003 (IPHEPHA LENKONZO1)
yesiiiiiiiiiii sisebenzela ukubulela
Intlanzi encinci sitsho
Ndizamile kwaye iyandisebenzela, bendinenye ingxaki, ayikuko ukuba andiyithandi, bendine windows live messenger, kodwa yandicela ukuba ndihlaziye entsha, 2009, kwaye andazi xk ayisebenzi kum, ayiqali iseshoni, kwaye hayi bendisazi ukuba ndiqhubeka njani nale. Ewe ndizamile ukwenza le nto uyibeka apho, ndiyenzile, yalungiswa i-msn, kwaye iyasebenza. Enkosi 😀
Xa bendifaka uhlaziyo khange ndivunyelwe ukungena kunye nezinye iiakhawunti endinazo.
Ngaba kukho uLite okanye uhlobo olukhaphukhaphu lomthunywa, kodwa ngaba luvela kuMicrosoft?
NDINESIQENDU 8.1 SOMTHUMI ENDIFUNA UKUQHUBEKA KUYO
IPHOWUSTA NDINYANZELELA UKUKHUTSHELA IVESI 9
NDIYISOMBULULA NJANI LE NKOSI NGONCEDO LWAKHO
NDISOMBULULA KANJANI LE mibulelo ngoncedo lwakho
kwaye uthini ngokudibanisa ??? Ngoku ndingangenisa iakhawunti yam ukusuka ku-8.5 yeyona ndinayo kwaye incasa yam yeyona ilungileyo kwezona zangoku kunye nezindala x ngokuthetha, kodwa ukudityaniswa akwenziwanga kusebenze: ewe ndizamile ngokufanayo kunye nefolda yokudibanisa kwiifayile zenkqubo kodwa akukho nto
Ngokwenene, enkosi kakhulu ngobuqhetseba, iyasebenzaaaaa!
Ndinenguqulo 9 kuba xa ndifuna ukuqala uguqulelo lwangaphambili aluyi kundivumela ukuba ndingene ukuba ibingahlaziyi. Ngoku ndihlaziyileyo, andiyithandi le nguqulo konke konke, kwaye ndicinga ukuba kusafuneka ndifake usetyenziso. Ngaba umntu unokundixelela ukuba ungayifaka njani ngokupheleleyo? Enkosi!
UMarcos Panozzo Menegay sitsho
Ogqwesileyo, enkosi intshatsheli. Usombulule ubomi bam !!
Phendula uMarcos Panozzo Menegay
thanksssssssssssss ndikhangele kuyo yonke i-intanethi kwaye bekukho iipatches nayo yonke into kwaye akukho nto isebenzayo! Ndiyabulela.
Molo enkosi ngencam! Ibindikhonza ... kodwa bebefuna ukukhuphela i-msn bukhoma kwi-pc yam (ngaphandle kokundibuza) kunye ne-7.5 ebesele ndinayo icinyiwe ... Khuphela i-7.5
Ndingenza ntoni ?? Kuba ndizamile ukutshintsha iisetingi ozinike ngaphezulu ("ukuhambelana") kwaye andikwazi.
Ndiyathemba ukuba ungandinceda! Enkosi!
Zintle !!! Isebenze ngokugqibeleleyo kum, njengabaninzi, bendinexesha lokukhangela isisombululo koku.
Andifuni ukubuyela kuleya yangaphambili, kodwa andinakho ukufaka ii-emoticons okanye ubuso nge-MSN Backup njengokuba ndandinjalo ngaphambili, ayizukundivumela, sele ndizamile yonke into kwaye ayizukundivumela, Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angenza njani? bendicinga ukubuyela kuguqulelo. elidlulileyo ukubona ukuba ngale ndlela ifake ii icon kwaye ukusuka apho vele uhlaziye entsha kodwa ayizukundivumela….
Enkosi kakhulu !!!… uguqulelo luka-2009 aluzange lusebenzele mna… kwaye ngoku, ndingabuyela kwakudala. Super ichazwe kakuhle. Upasile.
Eli qhinga lisebenze kakuhle kakhulu kum, kodwa i-msn plus ayisebenzi kum ngaphandle kokuyifaka… !!! Ndiyenza njani ukuba isebenze kum? Ndiyabulela kakhulu
Icebo elihle, ndizamile ngomthunywa 8.5 osele ephila kodwa enganqamki njenge-9 kwaye ayindibuzi uhlaziyo
Ibhegi encinci rnr (: sitsho
Enkosi kakhulu, iyandisebenzela !! enkulu !! 😀
Phendula uSolsito rnr (:
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ndiyakuthanda !!!!!
Isebenze kum ENKOSI =) =) =) =)
kodwa ndinengxaki i-plus ayisebenzi kum do ndenze njani?
Nooooooooooo Ndifuna ukudibanisa ukuyifaka kwakhona kwaye akukho nto
Ubuqhetseba obugqwesileyo, eneneni, nayo, ayikuko ukuba imingxunya yokhuseleko iyathintelwa, kuba yile nto uhlaziyo lwenzelwe yona, kodwa inkqubo yokulayisha ininzi, kwaye kunjalo sonke siqhelana nohlobo kwaye sinengxaki kwinto elula nesebenzayo.
INCREDIBLE, INGCEBISO EBALULEKILEYO !! SEGUI ASII
Ndicinga ukuba ligalelo elilungileyo, enkosi ndoda, undisindisile kwaye bendiza kuyilahla i-pc yam ngefestile, lol inyani ayikaze yenzeke kum kodwa njengoko besitsho ukuba kukho ixesha lokuqala, imibuliso kunye nombulelo ... amathamsanqa!
Molo, NDIWALANDELE AMANYATHELO ATHIWEYO UKUPHEPHA UKUHLAZIYWA KWE-MSN, IZOLO ENDIBENZILEYO UKUQALA ISESHONI YAM NGOKUQHELEKILEYO KODWA NAMHLANJE ANDINAKUKWAZI UKUYIVULA, NDIYINIKE NGENKCAZELO YOKUSEBENZA NOKUKHETHA UKUVULA KUNYE AYIVULEKI KUM BANOKUFUMANA ISISOMBULULO.
Andres id.ar sitsho
Phendula Andres id.ar
NGUBANI OYA KUQHUBEKA KUVESI 8.1 KODWA UHLAZIYO LOBUYINGA LUTHINTELA ...
yiya kwifolda apho inkqubo ifakwe khona
eyam yey: C: Iifayile zeNkqubo yeWindows LiveMessenger
emva koko jonga ifayile ebizwa ngokuba "msnmsgr.exe"
cofa kuyo ekunene kwaye ucofe iipropathi
kamva kuguqulelo lokungqinelana ukuya "windows 2000"
yiyo loo nto i-8D bayigijimisa ngale fayile inye kwaye abayi kufumana siko sohlaziyo kwesikrini ^ ^
Ndiyathemba ukuba i-8U izokukhonza
iqhinga liyasebenza, kodwa awungekhe usebenzise msn kunye!
Isebenzile kum !!!!
Ndayifuna ukuba iphathwe
Sele ndisebenzise zonke izikhombisi …… kodwa kutheni ndingakwazi ukuqala secion.demora kakhulu !!!!!!!!
ubusindisile ubomi bam mntakabawoooooooooooooooooooo… uyi hp
Ndiyifumana ilungile !!!!!! Enkosi, zama yonke into ... zezona zilungileyo 🙂
Molo, enkosi kakhulu ngolwazi, lundincedile. Bona ngabona baninzi !!!!
Molo, ndinentsholongwane kumthunywa wam omtsha kwaye andazi ukuba ndiyisusa njani, i-antivirus ayisebenzi kum, ndiqala iseshoni ngesiqhelo, kodwa xa ndivula incoko windows zivala ngokuzenzekelayo kwaye ndiyakwazi ' t wenze nantoni na, isisombululo nceda
Ndifakele ingxelo yakudala yomthunywa kodwa indicela uhlaziyo ngoku iyahlaziya kodwa ndalandela iqhinga le-oscar lichanekile oku kuzakuba ngumthunywa 8.5 okanye umyalezo obukhoma
Utitshala !!! ha ha !, ndine-8.5 efakiweyo kwaye ngobuqhetseba busebenze! Enkosi Mfundisi !!
Enkosi, isebenze kakuhle kakhulu kum nenguqulo engu-8.5 ngoku umbuzo ngowokuba iiwindows ezintsha livec 2010, leyo iphehlelelwe ngo-Matshi izakuqhubeka nokusebenza.
NAHUEL DE BERA sitsho
SOS A CAPO CHE RE NDISINDISIWE Bendingakhange ndibambe nanye kwi-old MSN !!! XD
Phendula u-NAHUEL DE BERA
-ds ukusukela kudala, inkqubo yomthunywa ophilayo, andizukuyivula, ndiyikhuphele kaninzi, idesktop yam igcwele ii icon esele zikhankanyiwe, ngokufanayo ne msm.plus.
Andazi ukuba kwenzeka ntoni kwikhompyuter yam kuthintela, kuyimfihlakalo.
-Ndinokufumana kuphela eziza ngokungagqibekanga, inguqulelo yokuqala, ukuze ndisebenzise i-mesenge ephilayo, kufuneka ndisebenzise enye ikhompyuter .., ndizamile indlela yokukhuphela enye inguqulelo kwakudala. Inokuba ndenze into egwenxa, kuba andiyifumenanga, angandithumela ukuba ndiyivuselele kwi-windonn live ...
UKUXABANGELA I-MEX sitsho
Molweni nonke …………. Kuyinyani ukuba eli qhinga lindikhonze ngokumangalisayo. kodwa iya kwabo bafuna ukulahla umthunywa 9.1 okanye ukudibanisa njengoko beyazi da iwal. Ha ,,,, kodwa kukho abo bacinga ukuba sele beyikhuphile kwaye basenengxaki yokufaka i-7.5 kwaye iyaqhubeka ……… .. qala uye kwipaneli yokulawula. emva koko yongeza okanye ususe iinkqubo, emva koko khipha umthunywa kunye ,,, ook. emva koko khuphela inkqubo: windows coca ukukhipha. Bayifaka emva koko bajonge umthunywa kwaye bayicime ngamandla kwikhompyuter yakho. P.S. Zama kwakhona i-zapmessenger (ihlala isebenza) ekugqibeleni jonga umthunywa 7.5 wenze iqhinga elingasentla kwaye wonwabe njengoko bekutshiwo, ukubulisa
Phendula kwi-ARMANDO MEX
Emma bau sitsho
Molweni nonke, ndicela nibone ukuba niyandinceda ... ndiyifakile i-messenger 8.5, yonke into ibihamba kakuhle kwade ngenye imini andazi ukuba kwakutheni ukuze aqale azinqamle yedwa, wangena engena ezokubona ii-imeyile zam, wandinika. umyalezo olandelayo:
UNGANGENA KWINYE IKHOMPYUTHA, ...
1.- Eli qela lahlukile andinazo iikhompyuter ezininzi kunale.
2.- Sele ndiyikhuphile yonke into kwaye ndawubuyisela umthunywa (bendicinga ukuba yimpazamo yam)
kwaye akukho nto ..
emva kwemizuzwana embalwa xa ndifunda imeyile yam iyanqamka kwaye ukuba kwibar ndigqibe kwelokuba nditshintshe idilesi, ikwaqhawuka.
enkosi .. ahh i-imeyile yam yile: rellamar@yahoo.com
Phendula ku-Emma Bau
Ndikhuphele ingxelo entsha ye-msn kwaye indinika impazamo, andinakukwazi ukuyisombulula kodwa ndenza eyangaphambili ayisebenzi ... ndibuyela njani kuhlobo lwangaphambili
Igalelo elilungileyo, undikhuphe engxakini, enkosi, ndiyayixabisa
Yindoda enkulu kangakanani ukusombulula ingxaki kum! graxx !!! ngokubhekisele !!!
Yeyiphi intlekele, entsha, eyangaphambili isebenze kakuhle, ikhompyuter iyacima andikwazi ukubonisa iwindow yomyalezo ukuba ndiyishiya ivulekile ixhonyiwe
Andiyithandi i-windows live messenger
kwaye kuthatha i-jet ukuqala iseshoni
kwaye ndizithandile windows zihlala i-7.5 ngaphezulu
Inqaku elilunge kakhulu, kodwa …… ukuba amaqhinga awasebenzi, kuyakuhlala kukho enye indlela »esisemthethweni» isithunywa (esivela kuMicrosoft)….
Yintlekele kwaye andinakubeka ikhamera yam ngale fowuni intsha yevidiyo kuphela, andiyithandi kwaphela, eyangaphambili ibingcono kakhulu kwaye ndifuna ukubuyisa uhlobo lwangaphambili, ndenza njani? Ndiyonyanya futhi le nto !!!!
Khumbula ukuba ukuze isebenze kwiWINDOWS VISTA, kuya kufuneka uyinike ukhetho IWINDOWS SERVER 2003 (INKONZO YENKONZO 1) ukubonisa uguqulelo lwe-PLUS, ukuba uyifakile, leyo inemibala emincinci ezindlebeni, njl.
Ndisandula ukuvuselela umthunywa kwaye undinika impazamo
Enkosi kakhulu, andazi ukuba kutheni umthunywa omtsha engandisebenzeli kodwa undigcinile =) graxxxxx
UJulius garcia sitsho
Uyenzile ntoni le nto? Uyazi ukuba ayingawo onke amazwe abelana ngeendlela ezifanayo kwaye ndilahlekile lonke unxibelelwano kwi-web cam eMasinger, oku akusebenzi kwaye sihlawula i-intanethi kakhulu kwizivumelwano eGuatemala ukuze singakwazi nokubabona abo sibathandayo. enye, ndinike ibersion yam. yangaphambili inembeko
Phendula ujulio garcia
Molo, namhlanje ndihlaziye i-msn bukhoma kwaye ngoku andinakukwazi ukunxibelelana nabafowunelwa abangenalo uguqulelo olufanayo nangaphambili ukuba. ubuyela njani kuhlobo lwangaphambili .. enkosi
Enkosi ngegalelo mzalwana, lisebenze kakhulu kum
ubuqhetseba bakho abusasebenzi mhlobo kwaye ngo-2011 ngekhe ubone ukhetho lokuthetha +
Enkosi, andinakukwazi ukufaka kwakhona umthunywa …… enkosi ngencam !!!
enkosi mhlobo, yenza le uyibonisileyo, kwaye umthunywa 7,5 uyasebenza.
Ndiyathemba ukuba le nto uyibonisayo iyaphumelela, yinyaniso leyo
NDIDELELEKILE NDINGANAKHO UKUNGENA EMSN YAM NGENXA YOKUBA IYABONAKALA YAYE IYABONAKALA NDINGENAKUZA ENTERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
molo, sihlobo, enkosi..uyisombulule ingxaki ... ngeefestile ezintsha zihlala ... ithumele kuphela iifowuni zevidiyo ... le 7.5 inemfihlo ngakumbi ... enkosi kulungile?
Ndine Windowa 7. kwaye ukufaka umthunywa kunye nohlaziyo kuyothusa. Ayinayo i-nik, ezidityanisiweyo zifumana ezincinci kwelinye icala ..
NDIFUNA UKUBA NOMTHUNYWA AXHUME KWAKHONA, KODWA NGOKUQHELEKILEYO. NGOKUQHELEKILEYO, ndenza njani? Sele ndiyikhuphile kwipaneli yokulawula.
kodwa kwi-DOCK, iyaqhubeka nokuxabisa, ndiyikhuphe apho, ndacima ikhompyuter ndathi xa ndiyilayita, kwavela kwakhona iwinds ye-mns ... NDIFUNA I-MSN ENDANDIKHE NDAYIBALELA ndinayo kwakhona
IGraxiazz puxa ngoncedo lwakho ndiyidinga ekugqibeleni ndingayifaka iGraxiazz :: D.
enkosi mzalwana .. nguwe AMADODA !! Imibuliso evela eLima, ePeru !!
Enkosi ngokwasenyameni, undijongile ndisebenzisa i-chiloO 😉
ENKOSI!!! Isebenzile !!! Ndiyayicaphukela inguqulelo yamvanje yeWindows yeWindows, iyacotha kwaye inzima, bambelela kwi-msn yakudala, isebenza ngakumbi kwaye iyasebenza! Masibone ukuba abantu baseMicrosoft bayayiqonda, ngamanye amaxesha incinci ingaphezulu, yishiye nje kanjalo 🙂
Isebenzile kum enkosi kakhulu.
Pff hey jonga, okwangoku ndenze ubuqhetseba kwaye ndaye ndonwaba ukuba ingasebenza -.- kodwa indixelela ngalo lonke ixesha ivula «ingxaki ibangele ukuba inkqubo ingasebenzi ngokuchanekileyo» kwaye indivalela ndedwa kwaye ngokukhawuleza : ingaba? : s kwaye sele ndikhangele yonke into: S
Phendula ku -Karen
Iifestile ezintsha azisebenzi kwaye ziyandinyanzela ukuba ndizisebenzise
Kubonakala kum ukuba bubuchule ukubona ukwazisa ukuba iphepha lewebhu le-hotmail linikezela kuwe ukuze kubekho inkcitho yexesha okanye ndazi ntoni ...
Umbuzo wam ngowokuba ndingakhuphela i-msn 2009 kwaye ndiyenze le nkqubo okanye inokwenziwa kuphela ngenguqulo 7.5 ye-MSN Messenger?
Ndiyathemba ukuba ungandiphendula
Edwin andres sitsho
ukuba ndiza kukuqaphela
kwaye uzive into emnandi kangaka
Yintoni le ndiwileyo
ngoku ngaphakathi kum.
Yiyiphi inqaba ende
yintoni intaba-mlilo ephezulu
yintoni umfana omhle
ukuba ndiwele eluthandweni.
Umoya uphuza isikhephe
inqanawa incamisa ulwandle
kwaye ndingathanda ukubethwa yimpepho
ukuba imilebe yakho ikwazi ukwanga
Ngala mehlo wandijonga
kwaye ngalo mzuzu
kwaye umgama ungasahlula
kodwa iyakuhlala isidibanisa
Lishumi imiyalelo leyo
Ndifunde ezimbini kuphela,
thando lunye uthixo
Ezulwini kukho iingelosi ezincinci
emthini iintaka ezincinci
emanzini iintlanzi ezincinci
kodwa akukho namnye unjengawe.
Ndingathanda ukuba lilanga
ukusithwa ngokupheleleyo luthando.
Umama wakho yirosi
Utata wakho ukuqamba
nawe nzala ka
Phendula ku-edwin andres